Iiplatifomu ezi-5 eziGqwesileyo zokuRhweba ngeDijithali ngoJanuwari 2022- Funda urhwebo lwe2
Iiplatifti ezi-5 eziPhambili zokuRhweba ngeDijithali ka-2021!
Phantse yonke into enexabiso ithengiswa ngandlela thile, imilo, okanye ifom. Emva kwayo yonke loo nto, besikade sityala imali kwizinto zendalo kunye neeasethi ezenziwe ngabantu ukusukela ekuqaleni kwexesha. Ke xa i-cryptocurrensets efana neBitcoin yathatha umhlaba ngoqhwithela, yayiqhelekile into yokuba ilizwe lotyalo-mali lifune isiqwenga.
Nangona iingqekembe zedijithali ngoku zidumile kubarhwebi abathengisayo kunye nabamaziko, kuye kwabakho ukuthandabuza ngokubanzi malunga nokuba semthethweni kwee-cryptocurrensets njengeklasi yeasethi. Ukuthandabuza akufuneki kubekhona-ngakumbi xa ujonga abanye babadlali abaphambili ababandakanyekayo kwindawo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufumana ukubonwa kwindawo yotyalo-mali yedijithali, Udinga iqonga lokurhweba elinokwenza ii-odolo zakho kunye nokubonelela ngezixhobo ezinokuthenjwa malunga nemakethi ye-cryptocurrency.
Kwesi sikhokelo, sijonga ezona ziqonga zorhwebo ze-cryptocurrency ze2021.
Ungazithengisa njani ii-cryptocurrencies?
Kwimo yayo esisiseko, ukurhweba nge-imali yedatha kukutshintshiselana ngeemali zedijithali. Ingqondo yokusebenza ifana kakhulu nokuthengiswa kwestokhwe okanye i-forex, apho uqikelela kwixabiso lesixhobo semali kwaye unethemba lokufumana inzuzo ngalo.
Namhlanje, kukho intaphane yeemali ezifumaneka kwiimarike. Nangona kunjalo, ezona ngqekembe zibini zibalaseleyo yi-Bitcoin kunye ne-Ethereum. Uninzi lwee-cryptocurrensets zikhuthazwa yitekhnoloji yeBlockchain, kwaye nganye inamazinga ahlukeneyo okuguquguquka. Okwangoku, ukubanakho kwabo kuqikelelwa ukuba kuya kuchaphazela imarike yezemali kakhulu, kuvule ithuba lotyalo-mali kunye namathuba okurhweba kubantu bazo zonke iintlobo kwaye ubungakanani.
Ngelixa oomatshini bokuthengisa ii-cryptocurrensets banokufana nezinye, izicwangciso ezisemva kokuqikelela ukuhamba kweemarike zahlukile. Kungenxa yokuba iicryptos azichatshazelwa ziintshukumo ezichaphazela ezinye iimarike zorhwebo. Umzekelo, imeko yoqoqosho lwelizwe inokuba nefuthe elibonakalayo kwidola yaseMelika okanye iponti yaseBritane, kodwa kunqabile kwi-crypto.
Kwelinye icala, xa ujonga izinto ezinje ngeziphene kwezokhuseleko okanye umthetho othintela ii-cryptocurrensets- oko nako inokuchaphazela ukuma kotyalomali kwengqekembe ekubhekiswa kuyo.
Zithini iiQonga lokuRhweba ngeDijithali?
Iqonga lokuthengisa nge-cryptocurrency livumela umtyali-mali ukuba athathe inxaxheba kurhwebo lwe-imali yedatha. Ungazithenga kwaye uzithengise ezi zinto zedijithali ngokuvula iakhawunti kunye nokwenza imisebenzi. Xa uyazi ukuba yeyiphi i-crypto ofuna ukuyithengisa, uya kugqithisa ulwazi kwiqonga lokurhweba, kwaye liya kuthi ngokuququzelela isivumelwano sakho.
Umtyalomali unokuya kurhwebo lwe-cryptocurrency ngeendlela ezimbini. Eyokuqala kukuthenga imali yedijithali ngendlela yayo yoqobo. Njengoko iicryptos zidijithali ngokupheleleyo, uya kubagcina kwi-crypto wallet yakho. Olunye ukhetho kukwenza urhwebo usebenzisa iiCFDs, ekuvumela ukuba uhambe ixesha elide okanye elifutshane kwimali oyikhethileyo ngaphandle kokuthatha ubunini.
Njengoko urhwebo lwe-cryptocur lwemali luselitsha kwicandelo lotyalo-mali, uya kufumanisa ukuba ayizizo zonke iindawo zorhwebo ezilawulwayo. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba ufuna ukutyala imali kwii-cryptocurrensets kwaye uthenge iasethi esezantsi ngohlobo olungqongqo. Kananjalo, ukuba uzimisele ukwenza njalo trade Iimali zokucoca ngeekhompyuter ngee-CFDs, emva koko akukho kunqongophala kweendawo zokurhweba ezinelayisensi kwimibutho yolawulo enjengeCCA kunye neCySEC.
Ngokufana nendlela esebenza ngayo inkqubo yomrhwebi, uya kucelwa ukuba uhlawule iifizi kunye neekhomishini kwiqonga lakho lokuthengisa elikhethiweyo. Oku kuxhomekeke kwindawo yokuthengisa kunye nenqanaba lotyalo-mali lwakho. Nangona kunjalo, akukho nzima kangako ukufumana amaqonga orhwebo anikezela nge-zero ikhomishini kuthengiso kunye nolwakhiwo lomrhumo wokhuphiswano.
Kutheni kufuneka uthengise kwiiNdawo zokuRhweba nge-Cryptocurrency?
Nangona ukuthengwa ngokuthe ngqo kufumaneka kwibala le-cryptocurrency, kukho izibonelelo ezininzi xa ukhetha i Urhwebo lweCFD indawo. Kwelinye, uninzi lwezi ndawo zokurhweba zikunika ukufikelela kwezinye iiasethi ngokunjalo. Ke, ukuba ufuna ukuzama ithamsanqa lakho kwi-crypto ngelixa uqhubeka urhweba kwezinye izixhobo zemali, unokukhetha indawo yokuthengisa egubungela zombini iziseko.
Nazi ezinye zeenzuzo zokurhweba nomthengisi weCFD crypto:
Ukufikelela kumzi mveliso wokurhweba nge-cryptocurrency
Inketho yokuhamba ixesha elide kwaye imfutshane usebenzisa iiCFD
Ukusebenza iiyure ezingama-24 ngosuku
Inkqubo elula yobhaliso
Izakhiwo zentlawulo yokhuphiswano
Ukukhetha ukusebenza namaqonga otyalo-mali alawulwayo
Kwicala elisezantsi, ukurhweba ngemali ye-imali yedatha kusathathwa njengokuyingozi. Ngaphandle kokuba unolwazi olugqibeleleyo lwazo zombini i-cryptocur lwemali kunye nomzi mveliso wotyalo mali, kunokuba ngumceli mngeni omkhulu ukwenza inzuzo. Kukho amatyala ngamanye amaxesha okophuka kwezokhuseleko okunokuchaphazela ngokubonakalayo amaxabiso abanzi ee-cryptocurrensets, ke yigcine engqondweni.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, njengoko eli shishini lilawulwa kakhulu, kubalulekile ukuba unamathele kumaqonga orhwebo anelayisensi yimizimba eminye.
Iindidi zePlatform yeNtengiso yeQonga
Kwicandelo elidlulileyo, sikhankanye iindlela ezimbini ezahlukeneyo abanokuthi bazithathe kutyalo-mali kwindawo yemali yedijithali- ubunini bendabuko kunye norhwebo lweCFD.
Apha ngezantsi sixoxa ngezi ndlela zimbini ngokweenkcukacha.
1. Ukuba ngumnini weeDijithali zemali
Abarhwebi banokuhlala bethenga kwaye babe nee-cryptocurrensets zabo ukuzithengisa kamva. Abatyalomali bajonge imeko yexesha elide kwintengiso, ngethemba lokuba amaxabiso aya kunyuka kwixesha elizayo. Nangona i-cryptocurrensets yiminyaka eli-11 kuphela ubudala, bathathe isikhokelo esifanelekileyo sokunyusa ukuphindaphinda kwexabiso.
Kule meko, ungamkela ubunini be-asethi eyi-100 kwaye uyigcine kwisipaji sakho sobuqu. Ngethuba nje ezi zinto zihlala esikhwameni sakho, awuyi kuchaphazeleka ngokuwa kweqonga lokuthengisa. Nangona kunjalo, izipaji zabucala zihlala zichaphazeleka kukukhuseleka- ke kuya kufuneka ukhathalele ngakumbi ekukhuseleni iiasethi zakho.
Iingcali zicebise ngokugcina ii-cryptocurrensets zakho kwisipaji sehardware. Nangona ikhuselekile, inokwenza inkqubo yokwenza intengiselwano kunye ne-bitcoin ibenzima ngakumbi. Ukuba unethemba lokurhweba rhoqo, ufuna enye indlela engcono esebenzayo ngakumbi.
2. Ukurhweba ngeeDijitali ngeeCFD
Uninzi lwamaqonga okurhweba nge-imali yedatha akuvumela ukuba urhwebe nge-imali yedatha ngaphandle kokuba ungumnini wezo ngqekembe. Izivumelwano zomahluko-ezaziwa kakhulu njengee-CFDs, makuthengise iiasethi ngokuhlawula umahluko kwixabiso ngexesha lokuvula nokuvala ikhontrakthi.
I-Cryptocurrency i-CFDs ibiza kakhulu, kodwa iza ngokulula kokurhweba ngonqakrazo lweqhosha Ngokusebenzisa iiCFD, abatyali mali bacingela kuphela ixabiso leemali endaweni yokuba babenazo.
Umzekelo, masithi uqikelela kwiBitcoin kwaye uziva unamandla. Endaweni yokuthenga ingqekembe ukuyithengisa ngenzuzo, utyale imali kuphela kulindeleke ukuba ixabiso liye phezulu. Olunye uncedo olubalulekileyo lokusebenzisa iiCFD kukuba unokuthengisa ngokufutshane iicryptos. Ngapha koko, uninzi lwamaqonga orhwebo alawulwayo abandakanyeka kwii-cryptocurrensets zikhuthaza ukurhweba ngeeCFD endaweni yokuba neengqekembe.
Ungayifaka kanjani imali kwiPlatform yeNtengiso ye-Cryptocurrency?
Kude kube kutshanje, ukufikelela kurhwebo lwe-cryptocurrency ngokusebenzisa imali ye-fiat yayingumbono ongenakwenzeka. Oku kwakunzima ngakumbi kubarhwebi abalawulwayo, kwaye ngenxa yoko, umntu kuye kwafuneka ukuba asondele kumaqonga orhwebo angalawulwa kwaye azilungiselele ukuphepha ubuqhetseba.
Ngoku, njengoko ishishini le-cryptocurrency lithatha i-leaps, amaqonga ngakumbi orhwebo axhasa imali ye-fiat kunye neendlela zokuhlawula ezikhuselekileyo zokunceda utshintsho. Ngokufana namanye amaqonga orhwebo, ukuba neakhawunti yedipozithi kuya kwenza ukuba urhwebo lwakho lube lula ngakumbi. Namhlanje, iindlela zokuhlawula ezikhoyo zibandakanya amakhadi ebhanki, ukuhanjiswa kwebhanki yendawo, ukuhanjiswa ngocingo, kunye nee-e-Wallets ezinje ngeSkrill, iPaypal kunye neNeteller.
Nokuba ubekwa phi kwihlabathi, unokufumana indlela yokufaka kunye nokutsala imali. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlawule umrhumo omncinci ukulungiselela ukuthengiselana. Ngaphaya koko, amanye amaqonga orhwebo afuna ukuba ugcine isixa esincinci sedipozithi kwiakhawunti yakho.
Imirhumo kunye neeKhomishini kwiiPlatform zeNtengiso zeDijithali
Abarhwebi be-Crypto bakubiza iinkonzo zabo ngokweentlawulo kunye neekhomishini. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemirhumo wonke umtyalomali ekufuneka ezazi ngaphambi kokuya kushishino nendawo yokurhweba.
The sasaza ngumrhumo ongathanga ngqo oya kuwufumana kuninzi lwamaqonga orhwebo nge-cryptocurrency. Kubalwa njengomahluko phakathi kokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa kwempahla. Xa kuziwa kwi-cryptocurrensets, ukusasazeka kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuphela xa uthengisa nge-CFDs.
Makhe sijonge kulo mzekelo.
Ubhalisa kwindawo yokurhweba ukuze utyale imali kwi-cryptocurrency
Ubeka i-oda yokuthenga kwi- $ 50,000
Umyalelo wokuthengisa uxabisa i-51,000 yeedola.
Ukusasazeka kwesi sixa setransekshini ye-2%
Kuya kufuneka uzuze ubuncinci nge-2% kule ntengiselwano ukuze uphule nakolu rhwebo. Kungenxa yoko le nto ufuna iqonga lokuthengisa elinikezela ukusasazeka okuqinileyo okungayi kuyitya kude inzuzo yakho.
Kuxhomekeka kwiqonga lokurhweba, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini kurhwebo ngalunye. IiKhomishini zihlawuliswa kuzo zombini iziphelo zentengiselwano, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule ikhomishini yokuthenga kunye nokuthengisa. Ikhomishini imelwe ngokweepesenti, kwaye isixa-mali sisekwe kwinkunzi yorhwebo.
Cinga ngale meko:
Indawo yakho yorhwebo inexabiso lekhomishini ye-1%
Xa uthenga iBitcoin eyi- $ 100, uya kuhlawuliswa i- $ 1
Xa uthengisa i-Bitcoin efanayo nge- $ 200, uya kuhlawuliswa ngaphezulu kwe- $ 2
Njengoko kubonisiwe, uya kuhlawula i $ 3 iyonke, iyonke ikhomishini yokuthenga nokuthengisa.
Imirhumo kwiidipozithi kunye nokurhoxiswa kwemali
Amaqonga ambalwa orhwebo anyanzelisa umrhumo kubadali ukuba bathathe idiphozithi kunye nokurhoxa. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uhlawule umrhumo obalwe njengepesenti yemali iyonke.
Oko kwathethi, akukho nzima ukufumana amaqonga orhwebo ahlawulisa intlawulo yedipozithi yentengiselwano. Abarhwebi abadumileyo bayayityeshela iirhafu zekhomishini, ke ubukhulu becala kukusasazeka ekufuneka unakho.
Zeziphi ii-cryptocurrensets onokuzithengisa?
Imarike yemali yedijithali okwangoku ibamba amawaka ee-cryptocurrensets. Ezi zaphehlelelwa emva kwempumelelo yeBitcoin, kwaye namhlanje, eyaziwa njenge "alt-coin". Nangona iingqekembe ze-alt zithathwa njengezinobuzaza kakhulu xa kuthelekiswa neBitcoin, kunokuba nzima ukuba bathengise, nazo.
Ngale nto ithethwayo, iingqekembe ezinje nge-Ethereum, Ripple, kunye neStellar Lumens zifumana ukwanda kwengqwalaselo kubatyali mali. Ezi ngqekembe ze-alt nazo ziwela kudidi lomngcipheko omkhulu, ke kuya kufuneka ulumke malunga nendlela ocinga ngayo.
Ungazithengisa njani ngokufutshane ii-Cryptocurrensets?
Kwangoko besikhankanyile ukuba ukuthengisa ngokufutshane kwe-crypto kunokwenzeka nge-CFDs. Ithetha nje ukuba uthatha urhwebo lwe-bearish kwi-cryptocurrency ethile, ngethemba lokwenza inzuzo ekuweni kwayo okulandelayo.
Masibonise indlela ukuthengisa okufutshane kusebenza ngayo kwiqonga le-cryptocurrency CFD.
Uqikelela ukuba amaxabiso eBitcoin ayehla kungekudala
Ubeka indawo yokuqala yokuthengisa kunye nomthengisi wakho
Uthengisa ngesibonda se- $ 10,000
Ixabiso leBitcoin lihla nge-2%
Kwistokhwe se- $ 10,000, oku kuguqulela kwinzuzo eyi- $ 200
Ubeka i-oda yokuthenga ukutshixa kwinzuzo yakho kwaye uphume kurhwebo
Kwimeko yehlabathi yokwenyani, ukuthengisa i-asethi ngaphambi kokuba ube nayo akunakwenzeka. Kulapho iiCFD zingena khona. Ngamanye amagama, ngokusebenzisa ii-CFDs, abatyali mali akufuneki babe ngabanini be-idijithali yemali ukuze bazithengise kuqala. Endaweni yoko, uqikelela kuphela kwixabiso elizayo.
Ngaba ukubonwa kunokwenzeka ngee-cryptocurrensets?
Akukho nto ibalekayo kwinyani yokuba abantu abaninzi nangakumbi bajonge ekurhwebeni i-cryptocurrensets efana neBitcoin kunye Ethereum. Ngale nto engqondweni, amaqonga orhwebo e-cryptocurrency sele enziwe ukuba afumaneke amandla kubatyali mali. Kwakhona, uxinzelelo lusebenza kuphela ukuba uthengisa nge-CFDs.
Ubungakanani besibonelelo obufumanekayo kuwe buxhomekeke kumava akho njengomtyali mali kunye nomgaqo-nkqubo weqonga lakho olikhethileyo lokurhweba nge-cryptocurrency. Ilizwe ngalinye likwanemigaqo eyahlukeneyo emalunga nokuthengisa nge-imali yedatha. Oku kuyakuba nefuthe elibonakalayo kwindlela ongasebenzisa ngayo. Imigaqo enjalo ithintela abatyali zimali ukuba bathengise ngesixa esikhulu kwaye bathathe ilahleko enkulu.
Yithi ungathengisa ngesixhobo se5: 1.
Oku kuthetha ukuba unokurhweba nge-5x isixa onayo kwiakhawunti yakho yedipozithi.
Ke ukuba unayo ibhalansi yeedola ezili-100, unokurhweba ngesibonda seedola ezingama-500 ngokusebenzisa amandla.
Qaphela ukuba nayiphi na inzuzo okanye ilahleko iyakwandiswa kunye nezinto ezininzi ozikhethileyo.
Ukuba ufuna ukuphakama okuphezulu, unokuhlala ufumana abathengisi abangalawulekiyo ababanikelayo. Kubathengisi be-novice, ukudibanisa zombini i-leverage kunye ne-cryptocurrensets kunokuba yindibaniselwano ebulalayo ngenxa yomngcipheko ophezulu obandakanyekayo kuwo omabini amacala. Kananjalo, qiniseka ukuba ufunda ii-ins kunye nokuphuma kolawulo lomngcipheko ngaphambi kokuba uhlukane nemali yakho!
Zikhuseleke kangakanani iiQonga lokuRhweba nge-Cryptocurrency?
I-Cryptocurrency ayikhuselekanga kwaphela kubagculeli, kwaye ngenxa yoko, abatyali mali abanakuze bawahoye amathuba okuphulukana nemali yabo. Kwiziganeko zangaphambili ezibandakanya ukukhwabanisa, iindawo ezimbalwa zokurhweba zikwazile ukubuyisa abathengi babo. Nangona kunjalo, ayisiyiyo imeko yomthengisi wonke kwisithuba.
Xa uthelekisa amaqonga orhwebo angalawulwa nalawulwayo, le yinto yokuqala ekufuneka ulinganisile kuyo. Ukuba usebenza namaqonga alawulwayo, kunokwenzeka ukuba ukhuselwe. Ukuba uhlala e-UK, ujonge i FCA ukuqinisekiswa, e-Australia ngu ASIC, kunye neCyprus yiCySEC. Ukubamba ilayisenisi ngokuqinisekileyo kongeza ukuthembeka kunye nodumo lwendawo yokuthengisa.
Ngaphandle kommiselo, kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uthatha isigqibo sokusebenzisa iqonga elingelilo i-CFD. Ngamanye amagama, uthenga i-imali yedatha ngendlela eyiyo-okuthetha ukuba unoxanduva lokugcina ngokukhuselekileyo.
Kushushu vs. UkuGcina okuBandayo
Ungazigcina ii-cryptocurrensets zakho kwindawo yokugcina eshushu okanye ebandayo. Ukugcina kushushu kuthetha ukuba isipaji sakho siza kuqhagamshelwa kwi-intanethi. Kwimeko yokugcina okubandayo, ayizukubakho. Nangona iiwallet ezishushu zikulungele ukuseta, iiwallet ezibandayo zikhuselekile. Ukhetha ufuna indawo yokurhweba egcina iiasethi zakho kwindawo ebandayo. Oku kuyakukhusela iakhawunti yakho kwizisongelo zokhuseleko lwangaphandle.
Amaqonga amaninzi orhwebo atshintshela kukuqinisekiswa kwezinto ezimbini. Oku kufuna ukuba uqhagamshele iakhawunti yakho kwifowuni yakho okanye kwi-imeyile, emva koko ukongeza omnye umaleko wokhuseleko kwiakhawunti yakho yorhwebo. Ngokwesiqhelo uya kufumana iPassword yeXesha elinye kwifowuni yakho ekufuneka uyingenisile xa ungena kwisiza.
Iindawo zokurhweba ezivumela abatyali mali ukuba babambe iiakhawunti ze-multisig ziya kufuna iisiginitsha ezimbini okanye nangaphezulu zokufikelela kule mali. Kuxhomekeka kwisiza, iMultisig iya kufaka isicelo sokurhoxiswa kwemali kunye nediphozithi.
Ukubhala ngokufihlakeleyo kwedatha
Ngelixa usebenzisa indlela yokubhatala efana nedebhithi okanye ikhadi lekhredithi, ufuna ukukhangela iisayithi zokurhweba ezibethela ulwazi lwakho lomntu. Njengoko lonke ulwazi olugciniwe kwiwebhusayithi luthanda ukuhlasela, kuya kufuneka ukhusele neenkcukacha zakho.
Uqala njani ukusebenzisa iqonga lokuthengisa nge-Cryptocurrency
Kulabo banamava kurhwebo lohlobo oluthile, ukungena kwii-cryptocurrensets kuya kuthetha ukongeza enye i-asethi kwipotifoliyo yakho. Kwelinye icala, abaqalayo baya kufuna uncedo olungakumbi. Ngale nto engqondweni, apha ngezantsi sidwelisa isikhokelo ngenyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokuqalisa ukurhweba kwindawo yokuthengisa nge-cryptocurrency namhlanje.
1. Khetha indawo yakho yokuThengisa
Xa unamakhulu amaqonga onokukhetha kuwo, kuya kusiba nzima ukwazi ukuba ngomphi umthengisi olungele wena. Kuqala kufuneka ufumanise ukuba loluphi uhlobo lweempawu ozijongayo kwaye yeyiphi indawo ehambelana kakhulu nomdla wakho. Nokuba yeyiphi na indlela yokurhweba, kuya kufuneka ukhethe iwebhusayithi elawulwayo kunye nenikezela ngemirhumo yokhuphiswano kunye nenkxaso yabathengi efikelelekayo.
Kwimeko apho ufuna uncedo olungaphezulu, sidwelise ezona ziqonga zorhwebo zibalaseleyo ze2021 esiphelweni sesikhokelo.
2. Bhalisa kwaye uqinisekise iAkhawunti yakho
Ukuqala inkqubo yorhwebo, inyathelo lokuqala kukuvula iakhawunti kwindawo yakho. Ngokubanzi, kuya kufuneka unikezele ngolwazi lwakho, kubandakanya igama lakho elipheleleyo, idilesi, ubuzwe, kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Nangona kunjalo, ukuze uqale ukurhweba, indawo kufuneka iqinisekise kuqala iinkcukacha zakho. Uya kucelwa ukuba unikezele ngesazisi esikhutshwe ngurhulumente kunye nobungqina bedilesi. Ezinye iisayithi zamkela izitetimenti zebhanki eziqeshisayo okanye amatyala okusetyenziswa njengobungqina bedilesi. Nje ukuba isazisi sakho siqinisekiswe, uya kufumana ukufikelela ngokupheleleyo kwiqonga kunye neempawu zalo.
3. Yongeza iNgxowa-mali kwiAkhawunti yakho
Yonke iqonga le-cryptocurrency lifuna ukuba ube nokuthengisa imali kwi-akhawunti yakho. Oku kuqinisekisa ukuba umthengisi uyakwazi ukwenza iiodolo zakho kwimizuzwana nje. Unokongeza imali usebenzisa enye yeendlela zokuhlawula esizixoxe ngaphambili.
4. Qalisa ukuRhweba
Kuxhomekeka kwiakhawunti yakho yorhwebo, uya kuba nokufikelela kwinani ledigital cryptocurrencies- zombini ngendlela ye-fiat-to-crypto kunye ne-crypto-to-crypto. Ukuba wenze uphando lobuchwephesha, ungaqala ukurhweba kwangoko. Into oyifunayo kukukhetha ukuba yeyiphi isibini ofuna ukuyithengisa kwaye ubeke ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo.
Isixa osirhwebayo siya kuthathwa kwi-akhawunti yakho yedipozithi, kwaye nayiphi na inzuzo okanye ilahleko nayo iya kubonakala ngokuzenzekelayo.
5. Ukurhoxisa iiNgqekembe
Ukuba uthenga ezi ngqekembe ngobunini ngqo, uya kuba nokukhetha ukurhoxisa imali oyithengileyo. Abanye abatyali mali bakhetha ukugcina iingqekembe kwiingxowa zesiza; Nangona kunjalo, oku akucetyiswa ngenxa yenkxalabo yezokhuseleko.
Uya kukhupha iingqekembe zakho kwi-wallet yakho ye-crypto. Nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele
Khetha ukhetho lokurhoxa kwindawo yakho yorhwebo
Khuphela-uncamathisele idilesi yesipaji sakho sobuqu kwicandelo lokurhoxa
Faka imali ofuna ukuyikhupha
Iimali zokugcina imali kufuneka zibe kwiakhawunti yakho ngaphakathi kwemizuzu okanye iiyure ezimbalwa, kuxhomekeke kwixesha lokuqhubekeka kweqonga lokuthengisa.
Kwimeko apho uthengisa nge-CFDs, amanyathelo angaphezulu okanye angaphantsi ngokufanayo, ngaphandle kokuba awunakho ukurhoxisa nayiphi na imali. Njengoko uthengisa ngezivumelwano, akukho ngqekembe itshintshisanayo.
Yintoni ekufuneka uyijongile kwiQonga leNtengiso ye-Cryptocurrency?
Ukusukela nge2021, kukho amakhulu amaqonga orhwebo e-cryptocurrency afumaneka kwimarike. Ngelixa ezinye ziziza ezibanzi zeCFD ezibonelela ngeeklasi ezininzi zeeasethi, ezinye zigxile ngokukodwa kwiinkonzo zokutshintshiselana nge-cryptocurrency.
Nokuba yeyiphi na indlela ogqiba ekubeni uhambe nayo (iqonga leCFD okanye utshintshiselwano nge-imali yedatha), kuya kufuneka uthathele ingqalelo ngaphambi kokuba ubhalise.
Imigaqo kunye neelayisensi
Iindidi zee-cryptocurrensets ezikhoyo kurhwebo.
Ikhetho lokuthengisa ngeCFDs
Nokuba umyinge uyaxhaswa
Iindidi zeendlela zokuhlawula ezikhoyo
Uhlobo lweefizi, ikhomishini, kunye sasaza
Elona qonga loRhwebo lweCryptocurrency lowama-2021
Ukuba awunalo ixesha lokwenza kuphando lwakho, ngoku siza kuxoxa ngamanye amaqonga ezentengiso e-cryptocurrency ka-2021. Ukukhetha kwethu abarhwebi bonke kubambe ilayisenisi enye yolawulo, ixhasa iindlela zokuhlawula ezininzi, kwaye vumela ukurhweba ngee-cryptocurrensets kwindawo ebiza indleko kwaye ikhuselekile.
Njengenye yeqonga lokuqala lokubonelela ngeenkonzo zokurhweba kwi-Intanethi, i-AVATrade ikwagunyazisile urhwebo nge-crypto olufumanekayo kubatyali mali. Iqonga lilawulwa ngabasemagunyeni abathandathu abalawulayo, ukuqinisekisa ukuba imali yakho ihlala isezandleni ezikhuselekileyo.
I-AVATrade ikunika ukufikelela kwiingqekembe zemali ze-alt, kunye nomgaqo-nkqubo we-zero-commission. Ngapha koko, akukho mrhumo webhanki uhlawulweyo kuyo nayiphi na intengiselwano, nokuba. Iinkonzo zayo ziyafumaneka ubusuku nemini, kwaye indawo isebenza ngeelwimi ezili-14.
Abasebenzisi banokunyuka ukuya kwi-1: 25, ngokusekwe kwindawo yabo. Kulabo bahlala kwi-EU, eyona nto iphambili kwi-cryptocurrensets isethwe ku-1: 25. Iqonga libonelela ngenkxaso ye-MT4, MT5, kunye neqonga labanini be-AVATrade.
Isishwankathelo, indawo yokurhweba nge-cryptocurrency ixabisa amawaka ezigidi zeedola mihla le. Ngelixa uninzi lwabarhwebi lukhetha i-BTC / USD, abanye bakhetha ukurhweba nge-crypto-cross-pair. Nokuba yeyiphi na imeko, ayisiyiyo kuphela indawo yokurhweba nge-cryptocurrency esebenza ngesiseko esinye sama-24/7, kodwa amanqanaba emali ngoku aphezulu kakhulu. Kananjalo, oku kuyenza ibe yeluncedo kakhulu kubatyali mali bexesha elifutshane kunye nelide.
Ngale nto ithethwayo, isitshixo sokusondela kurhwebo lwe-cryptocurrency kukuba nengqondo evulekileyo kunye nokuqonda umngcipheko obandakanyekayo. Njengoko uthengisa ngemali yokwenyani, kuyacetyiswa ukuba utyale imali kuphela oko unokukwazi ukukulahla.
Namhlanje, kukho amakhulu wabathengi be-crypto kunye neendawo zokurhweba ezinokuthi ziququzelele iimfuno zakho zotyalo-mali. Sebenzisa isikhokelo sethu njengesiseko sokuqalisa kukhangelo lwakho lweyonaqonga lifanelekileyo le-imali yedatha. Qiniseka ukuba uqwalasela kwaye uthelekise zonke izinto esele sizikhankanyile, kwaye awuyi kuba nangxaki ukuqala umsebenzi wakho wokurhweba kwi-cryptocurrency domain.
Yintoni indawo yokuthengisa nge-cryptocurrency?
Iindawo zokurhweba nge-idijithali yemali, okanye utshintshiselwano nge-crypto, ziiwebhusayithi ezikuvumela ukuba uthenge, uthengise okanye utshintshe imali ye-imali yedatha. Oku kukunika ukufikelela kwiBitcoin kunye nezinye izinto ezihamba phambili zeengqekembe zemali.
Yimalini endiyifunayo ukuqala ukurhweba nge-imali yedatha?
Uninzi lweendawo zorhwebo zifuna abatyali mali ukuba babe nediphozithi ubuncinci ukuze babhalise kwaye bagcine kwiakhawunti. Oku kunokuba sezantsi njenge- $ 100 kwaye kunganyuka kuye kwixabiso eliphezulu.
Zeziphi iintlawulo ezahlukeneyo ezichaphazelekayo kurhwebo lwe-crypto?
Iindawo zokurhweba ziyahluka ngokwakhiwa kwazo. Abanye baya kukuhlawulisa kwaye basasaze, ngelixa ezinye iisayithi zibonelela ngekomishini, kwaye zibiza kuphela ngendlela yokusasazeka okungagungqiyo. Ukuba uthatha ubunini bee-cryptocurrensets, ke iifizi zinokubandakanya idiphozithi kunye nokurhoxa kunye nekhomishini yorhwebo. Kwelinye icala, ukuthengisa nge-CFD akufuneki ukuba uhlawule iifizi okanye iikhomishini.
Uzifumana njani iziza zokuthengisa zedijithali ezilawulwayo?
Unokufumana ukuba indawo yokurhweba ilawulwa okanye ayikho kwiwebhusayithi yayo. Ukuba uthengisa nge-CFDs, indawo leyo kufuneka ibambe iphepha-mvume kumagunya egunya anjengeCCA, iCCSEC, okanye iBaFin. Unokukhangela nakwikhompyuter yeefayile zala maqumrhu ukuqinisekisa ukuba umthengisi unelayisensi.
Uyidlulisela njani imali kwiakhawunti yokurhweba?
Iindawo zokurhweba nge-idijithali yemali zifuna ukuba ube ulungele ukulondolozwa kwiakhawunti ukulungiselela ukuthengisa ngokukhawuleza. Unokongeza imali ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula kwiwebhusayithi yomrhwebi, ezinje ngokudluliselwa kwebhanki, amakhadi etyala / amakhadi etyala, okanye ii-e-wallets.
Ngaba ikhona imida yokufumana imali kurhwebo lwe-imali yedatha?
Ukuba ufuna ukurhweba ngee-cryptocurrencies kwi-leverage, kuya kufuneka urhwebe nge-CFDs. Umda wokuphakama ofumanekayo umiselwe yindawo, ukuma kwayo kolawulo, amava akho kurhwebo, kunye nemigaqo-nkqubo nganye ebekwe ngumthengisi. Umda wokuphakama unokwahluka kwii-cryptocurrensets kunye nezinye izixhobo zemali.
Ewe, urhwebo lweCFD luvumela abatyali mali ukuba bathengise ixesha elide kunye nothengiso olufutshane.